Ikhamera yokubeka iliso kwi-Shabbat-Rabbi Michael Avraham
Ikhamera yokucupha ngoMgqibelo
Iimpendulo > Udidi: Halacha > Ikhamera yokucupha ngoMgqibelo
Iphayina Ubuzwe kwiminyaka emi-6 eyadlulayo
Ngaba ucinga ukuba akuvumelekanga ukudlula phambi kwekhamera elandela i-traffic ngoMgqibelo, okanye phambi kwethotshi ekhanyiswa yi-traffic, ucinga ukuba andinamdla wokukhanyisa isibane okanye ukukhanyisa ikhamera.
mikyab Abasebenzi Uphendulwe kwiminyaka emi-6 eyadlulayo
Ngokolwazi lwam akukho sithintelo kule nto. Kwaye abaninzi sele bejongene nayo (umzekelo kwi-responsa ye-Shevet Halevi kunye nokunye). Bona umzekelo apha:
Uriel Uphendulwe kwiminyaka emi-6 eyadlulayo
Umbuzo kumxholo ofanayo..
Kuthekani ngokuhamba phezu kwesixhobo sokubona umthamo we-alam xa inkqubo icinyiwe?
I-System off = i-detector isebenza kunye nezilumkiso kodwa inkqubo ayiyi kukhala i-alamu njengoko ikwimo yokulinda. I-detector ayinacingo kwaye inokuhambisa kuphela ngaphandle kokufakwa kwegalelo, ngoko ayikwazi ukucima ngenkqubo kodwa ngokususa ibhetri kuphela.
UMichi Abasebenzi	Uphendulwe kwiminyaka emi-6 eyadlulayo
Yintoni umahluko? efanayo nangentla.
Uriel Uphendulwe kwiminyaka emi-5 eyadlulayo
Woyisa nje umbuzo.
Oku kuthetha ukuba i-detector isebenza kwaye idlulisa rhoqo xa udlula, kodwa inkqubo ye-alamu ayiphenduli kwi-transmitter.
Sisixhobo esifakwe endlwini yam kwaye ndinomgaqo-siseko phambi kokuba yonke iMigqibelo ndigqume ii-detectors / ndisuse ibhetri.
Umahluko kuphela kukuba ndinenketho yokusombulula ingxaki. Umbuzo kukuba le ngxaki iyimfuneko.
UMichi Abasebenzi	Uphendulwe kwiminyaka emi-5 eyadlulayo
Ukuba umtshina uyavuka kodwa ungathumeli nto andiboni sizathu sakukhathazeka. Ngokombono wam akukho sithintelo kule nto. URabi uRabinowitz uhlaziywe ukuba xa ungaboni iziphumo ezithe ngqo zesenzo akunqatshelwe (kwikhadi elivula umnyango wehotele ngeShabbat), kwaye kulapho kukho iziphumo (umnyango uvula) kodwa ungaboni iziphumo zokudluliselwa. ikhadi. Le yinto entsha endingaqinisekanga ukuba ndiyavumelana nayo. Kodwa apha akukho ziphumo konke konke (kwaye hayi nje ukungaziboni) ngoko andiboni sidingo sokwenza mandundu.
uMoses Uphendulwe kwiminyaka emi-5 eyadlulayo
Ndicinga ukuba kufuneka uvule idetector kuphela ngeentsuku ongekho ngazo ekhaya. Ngokucacileyo akunjalo?
Joyina abongezelelweyo 3,091 ababhalisile
Ukubaluleka kwefilosofi kumbuzo wokuba kutheni sikholelwa
Ngelishwa ndahlala phezu kwayo ngexesha lokusweleka kwakhe.
Yonke into yenziwe ngobunjineli. Yintoni enxulumene nazo zonke iintlobo zocwangciso-mali '?
umntu Vula Ngaba iLehavah ngumbutho wocalucalulo? (Uluhlu lwama-484)
Isandwich yeavokhado Vula Impendulo yokubaluleka kwefilosofi kumbuzo othi kutheni sikholelwa
Ewe Vula Phendula kunyulo
mikyab Vula Ngaba iLehavah ngumbutho wocalucalulo? (Uluhlu lwama-484)